Maxaa Cusub AutoCAD 2008? - Geofumadas
Maxay AutoCAD 2008 mar kale leedahay?
Disember, 2007 AutoCAD-AutoDesk, Microstation-Bentley
Su'aasha wanaagsan, miyuu u qalmaa in uu u guuro ... ama hirgelinta qalab cusub oo isha lagu hayo?
Aan aragno qaar ka mid ah horumarinta:
In 2006-2007 versions waxaan arkay aragtida hagaajinta ah ee xakamaynta dhismayaasha firfircoon, maaraynta firfircoon, iyo dhamaadka xisaabiyaha qaynuunka. 2008 waxaan arki karnaa:
Maaraynta qiyaasta warbixinta
Meelaha qolka laysku sawiro
Qorshaha hoggaanka ayaa hadda lagu dabaqi karaa meelo kala duwan
Hagaajinta maareynta miisaska
Waxaad kuxiriri kartaa miisaska miisaska, adigoon soo dejin
Isticmaalidda suumanka iyo cutubyada qoraallada kala duwan
Qaar ka mid ah guryaha dheeraadka ah ee cabbirka wareegga 2
Heerka wadashaqeyntu waa:
Isdhexgalin fiican Microstation, waxaad soo dhoofin kartaa iyo dhoofin kartaa dgn V8 iyo XM faylasha
Heerka nidaamyada hawlgalka:
AutoCAD 2008 waxay ku shaqeysaa Windows Vista Enterprise, Ultimate, Ganacsiga iyo Guriga
Waxay kaloo ku socotaa 64.
Heerka daabacaadda, wax cusub ma jiro tan iyo markii la daabacay pdf iyo wdf ee version 2007.
Heerka 3D wax cusub ma jiro, laakiin waxaan u maleyneynaa in aanu ku raaxeysanayno wax kasta oo cusub ee 2007 (aragtida aragtida, dhimista, talaabo talaabo, tallaabooyin firfircoon.
Waxba kama jiraan marxaladda bandhigga, kaliya laba ka mid ah horumarinta qalabka iyo iftiiminta, inkasta oo nooca 2007 aan jeclahay saamaynta geesaha iyo sharraxa iyo sidoo kale jiiditaanka iyo hoos u dhigista shaqooyinka iyo hooska waqtiga dhabta ah.
Heerka gargaarka user uusan wax arkin muddo dheer, laga bilaabo animations ee xarunta caawinta, waqtigan waxay fuliyeen Infocenter ah ... weli weli ma ogaan waxa loogu talagalay 🙂
Laakiin haddii aad rabto inaad maqasho codka muuqaalka Lynn Allen, halkan waxaa ku jira fiidiyaha iyo maskaxdeeda ah ee curvaha wanaagsan.
Waxaad kaloo soo dejisan kartaa buug-gacmeedka AutoCAD 2007 iyo 2008 halkan
Post Previous«Previous Ku beddel faylka dwg la'aan iyada oo aan lahayn AutoCAD
Post Next Nidaamyada GIS lacag la'aan ah, maxaad u caan ahayn?Next »
5 Jawaab ayaa ah "Maxay AutoCAD 2008 mar kale leedahay?"
taas oo lagu sameeyo moodooyinka, waxaad abuureysaa noocyo badan oo aad ubaahan tahay inaad aragto aragtiyaha ku jira qaabeyntaada, oo ay ku jiraan faylasha tixraaca
jose martinez isagu wuxuu leeyahay:
sida aan u abuuri karo aragtida MicroStation, autocad waa mid aad u fudud adigoo adeegsanaya habka.
AGUAMARINA isagu wuxuu leeyahay:
BARNAAMIJKA WAXAA KELI KARAA MARKA AAD KA QAADINAYO QEYBAHA MAGANGELYADA
Diseembar, 2007 at
Hi José, xiriirkani wuxuu sharraxayaa sida loo hirgeliyo unugyada microse-ka si loo xakameeyo dhuxusha
Waxaan u baahanahay inaan u guuro maktabadaha celceliska microstation ilaa autocad